'खेलकुदमा अपहेलित विधा' - Khelpati
'खेलकुदमा अपहेलित विधा'
बिहिवार, आश्विन ४, २०७५ खेलपाटी संवाददाता
फोटो : सुरज भुसाल (फेसबुकबाट)
काठमाडौं । एशियन गेम्स हेर्दा नेपालले पदक जित्न निकै मुस्किल देखियो । नेपाली खेलकुद र नेपालकालागि निकै दुखको बिषयमा हो । यसमा खेलाडी र खेलकुद जगतमा मानिसले बुझेको जस्तो लागेन ।
मेरो अनुभवनमा नेपाली खेलकुदको साह्रै अपेहेलित विधा ‘मेडिकल’ हो । मैले सधै भन्ने गरेको छु, खेलकुदमा जहिल्यै तीनवटा ‘एल’को महत्व हुन्छ ।
एक, मेडिकल ।
दोस्रो, फिजिकल ।
तेस्रो, टेक्निकल ।
जब कुनै खेलाडी मेडिकल रुपमा फिट हुदैन, त्यसले कसरी नतिजा दिन सक्छ ।
मैले खेलकुद जगतमा कहिपनि यसलाई भेटिन । त्यसको भागेदार मपनि हो । मैले परिवर्तन ल्याउन सकिन होला तर खेलकुदमा मेडिकल विधा देखेको छैन ।
हरेक खेल अगाडी प्रि मेडिकल चेकअप हुन्छ ।
कुनैपनि खेलाडी मेडिकल्ली ठिक छ वा छैन भन्ने बिषयमा चेकअप गरेको देखिदैन । तर त्यो आवश्यक छ ।
खेलाडी मेडिकल्ली रुपमा फिट हुन आवश्यक छ तर त्यसलाई वेवास्ता गरिएको छ । यदी कुनै खेलाडी मेडिकल रुपमा फिट छैन भने त्यसले कसरी पदक ल्याउन सक्छ । कसरी प्रर्दशन राम्रो गर्न सक्छ ?
फिजियोको रुपमा मैले धेरै लामो समय फुटबलमा काम गरे । तर यहाँ एउटा पुर्नस्थापना केन्द्र समेत छैन । एउटा खेलाडी घाईते भयो भने लामो समय मैदान बाहिर बस्छ । त्यो खेलाडीलाई सामान्य मेडिकल सेवा सुविधा समेत छैन । यस्ता कुरा निकै महत्वपुर्ण हुन्छन् । यसले खेलाडीको मनोबलदेखि प्रर्दशनलाई निकै असर गर्छ । त्यसैले मेडिकल विधा निकै महत्वपुर्ण हुन्छ, हरेक खेलकुदकालागि ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले समेत मेडिकलकालागि सानो विभाग गठन गरे जस्तो लाग्छ । तर त्यो बैज्ञानिक छैन, पर्याप्त छैन । यसमा हरेक सम्बन्धित निकायले बिशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
मुख्य कुरा मेडिकल निकै महत्वपुर्ण छ, यसलाई सम्पुर्णले महत्वकासाथ हेर्नपर्छ । राखेपमा समेत एउटा मेडिकल रिसर्च सेन्टर छ, जो निकै पुरानो अवस्थामा छ । संसारमा नयाँ नयाँ प्रविधि र उपचार तरिकाको विकाश भईसकेको छ ।
पछिल्लो ओलम्पिक गेम्समा समेत कपिङ् थेरापीले पौडीवाज र एथ्लेटिक्समा निकै ठुलो परिवर्तन ल्याएको निष्कर्श निस्कियो ।
उनीहरुको प्रर्दशनमा परिवर्तन आएको छ । त्यसप्रकारको अनुसन्धान नेपालमा हुनपर्छ । यस्तो खालका अनुसन्धानबाट विदशी खेलाडीले लाभ पाईरहेका छन् । तर नेपाली खेलाडीले पाउने कहिले ?
मेडिकल जस्तो बिषयमा सानो कुराबाट परिवर्तन आवश्यक छ । नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा ठुलो अपेक्षा रहदैन तर सामान्य कुरा ल्याउन सकिन्छ । कम्तिमा डाक्टर वा फिजियो त अनिवार्य गर्ने हो कि ?
खुसीको कुरा, मैले बिगत ४ बर्षबाट राष्ट्रिय फुटबल टिममा टे«नरको अवाश्यक छ भनिरहेको थिए । किनभने फिटनेसको कुरा टे«नरले हेर्ने हो । डाक्टर र फिजियोको क्षेत्रभित्र त्यो पर्दैन । अहिले फुटबल टोलीमा बिक्रम अधिकारी ट्रेनरको रुपमा हुनु हुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो । अहिले भर्खर जीपीएसको प्रयोग भईरहेको छ ।
यसले कालान्तरमा निकै राम्रो नतिजा दिन्छ । भर्खरै प्रयोगमा ल्याएको नयाँ प्रविधिले तत्काल परिणाम नदिन सक्छ । तर कालान्तरमा यसले नतिजा दिन्छ ।
अर्को दुखको कुरा हामीसंग पुर्नस्थापना केन्द्रहरु छैनन् । बिशेष फुटबल खेलाडीकालागि । प्राय खेलाडी घाईते हुन्छ, बाहिरिन्छ । खेलाडी घाईते भएर लामो समय मैदान बाहिरिनुलाई मैले राम्रो कारण मान्दिन ।
रविन श्रेष्ठ अहिले मैदान बाहिर छ । भोली अर्को खेलाडी चोटले बाहिरिन्छ । तर राम्रो खेलाडी बाहिरिदा टोलीमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा अहिले देखिन्छ ।
हामीले खेलाडी घाईते भएपछि टोली बाहिर नराख्नलाई उपाय खोज्न पर्छ । फगत फिजियोमात्र राखेर हुदैन । त्यही अनुसारको सामान आवश्यक छ । त्यस प्रकारको पुर्वाधार निमार्णमा हामीले ध्यान दिनपर्छ ।
त्यसैले मेडिकल विधालाई समेत विभिन्न सरोकारवाला निकायले ध्यान दिएर अघि बढाउन आवश्यक छ । जसरी हामी राम्रो मैदानको खोजीमा छौ, खेलाडीको खोजीमा छौ । त्यसरीनै खेलकुद क्षेत्रले यसमा बिशेष ध्यान पुर्राउन अवाश्यक छ ।
भुुसालले राष्ट्रिय फुटबल टिममा फिजियोको रुपमा काम गरे थिए ।
जातीय विभेदविरुद्ध लड्न जोर्डनद्वारा १ सय मिलियन सहयोग
तेक्वान्दो खेलाडीलाई सिलवालको राहत
काठमाडौं तेक्वान्दोद्वारा खेलाडीलाई सहयोग
एन्फा अध्यक्षलाई कारबाही गर्न संसदमा माग
उपाध्यक्ष मास्केद्धारा स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग
रंगभेदबिरुद्धको आन्दोलनमा थ्री स्टारको समर्थन
'एभर्टनसँग लिभरपुललाई हराउने क्षमता छ'
प्रदेश-२ अनलाईनबाट क्रिकेट गतिविधि सुरु गर्दै
विश्व च्याम्पियन नासेर निलम्बित
पीएसजीमा खुशी छु - डी मारिया